Boutique Apartment Bodensee-Ach riverside woods
IBoutique Apartment Bodensee-Ach riverside woods ibekwe kwisakhiwo esidweliswe ngokwembali ukusuka ngo-1910, sifakwe kwindawo enoxolo yelali eHard, kwaye kukuhamba nje umgama osuka kumahlathi omlambo i-Ach kunye ne-promenade yechibi.
Indlu ezaliswe zizikhukula ngokupheleleyo kwaye yalungiswa ngononophelo kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo ngayo yonke into ukwenza nzima ikhaya lakho ngeholide ehlaziyayo kunye nokuphumla okanye ukuhlala emsebenzini eLake Constance. Indawo yokuzimela entle ene-WIFI enesantya esiphezulu. Ngena nge-key-ekhuselekileyo.
Indawo yokulala yamantombazana yangaphambili sisakhiwo esithandekayo esidweliswe kwiBanga lesi-II ukusuka kwi-1910. Indawo yokuhlala ye-boutique ngokwayo iye yahlaziywa ngononophelo kwaye yahlaziywa ngokupheleleyo ngo-2018 ukuze ibonelele zonke izibonelelo zokuphumla kunye nokuphumla. Ibonelela ngesiseko esifanelekileyo sohambo oluya ezintabeni kwaye ngokuqinisekileyo iLake Constance. Uyilo oluzolileyo noluqwalaselweyo olunokwakheka okuninzi kwendalo kunye neembekiselo ezikufutshane, ichibi elithandekayo kunye neentaba.
"I-Ach riverside woods" inamagumbi amabini ahlukeneyo: Igumbi lokulala eliPhambili elinebhedi enkulu yenkosi (180x200) kunye nencinci, igumbi lokulala le-2 kunye nentsha, emhlophe "yebhedi": ubungakanani bukakumkanikazi (140x200) kunye nebhedi ephezulu (90x200) . Idesika encinci kunye nesitulo. Igumbi lokuhlala elinezikhukula ezigcwele ukukhanya kunye negumbi lokutyela elinezixhobo ezipheleleyo, ikhitshi elitsha (isitovu sokungenisa, i-oveni, isikhenkcezisi esikhulu sesitayile sevintage, njl.njl.) kunye nomatshini wokuhlamba izitya. Iketile, "Bialetti" umenzi we-espresso moka kunye nomatshini weNespresso. I-daybed ebuyiselweyo yoqobo esuka kwindawo yokulala yentombazana yangaphambili inika iimbono ezinoxolo zehlathi elikufuphi nomlambo.
Igumbi lokuhlambela eline-enamel yokuhlambela kunye nomatshini omtsha wokuhlamba.
Indawo, indawo, indawo kwaye akukho Hilton emehlweni. ;-) Simi kanye phezu kwe Margarethendamm eHard, ngoko ke maqondana namahlathi azolileyo ajikeleze umlambo wasendle iAch, indawo yokhuseleko lwendalo. Inzima ngokwayo yenye yeendawo ezimbalwa kwiLake Constance enechibi elingachithwanga nendalo, yonke nje imizuzu emi-5 ukuhamba ukusuka apha. Isixeko senkcubeko saseBregenz, esisindleke kwakhona umnyhadala odumileyo we-opera ovulekileyo, kukuhamba kuphela okanye ukukhwela ibhayisekile ukuwela (ukuhamba kunye nebhayisekile) ibhulorho, iHard ngokwayo yilali encinci enomtsalane eneziseko ezibalaseleyo kunye nenye yezona ndawo zintle zihambayo. ILake Constance, eyona ndawo inkulu yokuphumla elwandle kummandla ("iStrandbad"), kunye ne-surf / iseyile / SUP / irenti yezikhephe. Indawo yolondolozo lwendalo i-Rheindelta ikwafikeleleka ngokulula ukusuka apha, ngokukhethekayo kwenye yeendlela ezininzi zomjikelo ongathandekiyo kumhlaba omgxobhozo we "Ried". I-Grüner Damm inika umdla unyaka wonke. Le Lido efana nesakhiwo, wadala njengokhuselo nxamnye silting ye Alpine Rhine, inika ukufikelela ukuhlamba ekhuselweyo zombini ukuya "Binnenbecken" kwaye ngqo Lake Constance. Ebusika, iindawo zokungcebeleka ze-ski ze-Bregenzerwald kwicala lase-Austrian kunye ne-Swiss Alps (iiFilms, i-Laax njl.) Kulula ukufikelela (i-30 ngomzuzu wokuqhuba) kwaye kukho iindawo ezintle ze-ice rinks zokufumanisa.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hard